HUAJING chakaita zvokugadzirwa mica dzakatevedzana chigadzirwa adopts musimboti utsotso crystallization mune yakakwirira tembiricha. Zvinoenderana nemakemikari echisikigo emakemikari uye chimiro chemukati, chakagadzirwa mushure mekupisa electrolysis uye nekunyunguduka mune yakanyanya tembiricha, kutonhora uye crystallization, ipapo synthetic mica inogona kutorwa.
Rabha Giredhi Mica Powder
Chinhu Ruvara Kuchena (Lab) Particle saizi D90 (μm) Insulation Kuchena (%) Magnetic Chinyorwa (ppm) Mositure （%） ZVIREVO (650 ℃) PH Tarira
HCD-200 chena ＞ 96 60 Yakanyanya kukwirira .9 99.9 ＜ 50 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Yakakwira Performance Insulation
HCD-400 chena ＞ 96 48 Yakanyanya kukwirira .9 99.9 ＜ 50 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-200 Muchena Muchena ＞ 98 65 Yakanyanya kukwirira .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Yakakwira-kumagumo Insulative Chigadzirwa
HCW-400 Muchena Muchena ＞ 98 50 Yakanyanya kukwirira .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-600 Muchena Muchena ＞ 98 25 Yakanyanya kukwirira .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
HCW-1250 Muchena Muchena ＞ 98 15 Yakanyanya kukwirira .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6
Mukushandisa kwerabha munda, mica inonyanya kutora mukana weaviri-mativi chimiro cheiyo mica pachayo, iyo inopa yakanakisa yekusimbisa mhedzisiro yezvigadzirwa zverabha. Natural yakasarudzika kuputira zvivakwa, inopa yakanaka yemagetsi kuputira mashandiro kune yakakwira kuputira rabha. Uchishandisa chipinganidzo mukana wemicheka jira, inowedzera kusimba kwemhepo; Inogona pamwe kutsiva silika, chii chinopa imwe yezvehupfumi mhinduro dzerabha rinoumbwa nezvinhu; Kwakanaka shear kushorwa uye abrasion kuramba, inovandudza yakasimba dutu rekuramba kuramba kweabrasion nemishonga rabha. Smooth uye yakanakisa interface mhedzisiro inopa yakanaka yekuzviparadzanisa hunhu hweforoma.
HUAJING chakaita zvokugadzirwa mica dzakatevedzana chigadzirwa adopts musimboti utsotso crystallization mune yakakwirira tembiricha. Zvinoenderana nemakemikari echisikigo emakemikari uye chimiro chemukati, chakagadzirwa mushure mekupisa electrolysis uye nekunyunguduka mune yakanyanya tembiricha, kutonhora uye crystallization, ipapo synthetic mica inogona kutorwa. Ichi chigadzirwa chine zvakanakira yakachena kuchena kuchena uye ransparence, super yakaderera simbi zvemukati, hapana inorema simbi, kupisa-nemishonga, asidhi nemishonga alkali nemishonga, uye zvakare inopesana nekuora kweinoxious gasi, kugadzikana kuita uye kwakanaka kuputira.
Main Property Musiyano Pakati Chakagadzirwa Mica Uye Natural Mica
1. Synthetic mica haina hydroxyl (OH) -, uye kupisa kwayo kwakanyanya uye kudziya kwemafuta kwakakwirira kupfuura iyo mica yechisikigo, uye tembiricha yebasa inenge 1100 ℃. Iyo fluorophlogopite inoora zvishoma nezvishoma pamusoro pe1200 ℃, uye iyo yekunyungudika tembiricha ye fluorophlogopite ingangoita 1375 ± 5 ℃. Iko kupisa kwekushandisa kwepamusoro kwemasikirwo echisikigo: Muscovite 550 ℃; Muscovite 800 ℃ (Muscovite wepanyama anotanga kuora pa450 ℃ uye angangoita zvachose pa900 ℃; Muscovite inotanga kuora pa750 ℃, iine uremu hwakakosha pamusoro pe 900 ℃). Mica mhando dzinogona kusiyaniswa neakanyanya kupisa tembiricha kana kusiyanisa kwemafuta kuongororwa.
2. Synthetic mica ine tsvina shoma uye yakajeka. Kunze kwekuti kuomarara kwayo kwakati pfuurei kupfuura iyo yechisikigo mica, zvimwe zvemuchina zvivakwa, kuputira magetsi uye kupukutisa kunze kwemidziyo yekugadzira mica iri nani pane iyo yemasikirwo mica. Synthetic mica inogona kutsiva zvakasikwa mica uye iri mhando nyowani yekupisa tembiricha inodzivirira inodziya zvinhu zvine hunyanzvi uye hunhu.
A. 20 kana 25kgs / Pe rakarukwa bhegi
B. 500 kana 1000kgs / PP bhegi
C. sekukumbira kwevatengi
Pashure: Natural mica upfu
Chakaita zvokugadzirwa Fluorphlogopite Mica
Chakaita zvokugadzirwa Mica
Chakaita zvokugadzirwa Mica Flake
Chakaita zvokugadzirwa Mica Makeup